ဖက်ရှင်အမျိုးသမီးပုံစံ-သငျ့အင်္ကျီ - ရှည်လျားသော, ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္ကို double-ရင်သားကင်ဆာတိုဒူး-အရှည်, padding ကို polyester, ဇစ်, ဂန္, ဝတ်ဆင်ရန်ဘာလဲ?
Close-သငျ့အင်္ကျီ - ဖက်ရှင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ, Demi မော်ဒယ်များနှင့်ရုပ်ပုံများကိုသူတို့နှင့်အတူ
close-သငျ့အင်္ကျီပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အခါးကိုအလေးပေးရန်ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးချင်းစီဖက်ရှင်သင့်ရဲ့အကြိုက်တစ်ခု option ကိုရှေးခယျြခွင့်ပြုမော်ဒယ်များအမျိုးမျိုးဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာစဉ်ကတစ်ဦးဣတ္နှင့်ကြော့လေးဖန်တီးသင့်လျော်သည်။
အမြားအပွားကျော်ကြားဒီဇိုင်နာများ၏ collection များကိုခုနှစ်တွင်အမျိုးသမီးပုံစံ-သငျ့အင်္ကျီကိုပေးအပ်သည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ features တွေကအောက်ပါနေကြသည်အပါအဝင်ပုံစံများ၏မူကွဲအမျိုးမျိုးကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်:
ဂန္စတိုင် brevity နှင့်ရိုးရှင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောချောမွေ့ဖြတ်, ဖြစ်စဉ်းစားသည်,
ကျွန်တော်တစ်ဦး fluffy အင်္ကျီပုံနဲ့တူတဲ့တစ်အိုးပေါကျကှဲအောက်ခြေနှင့်အတူမော်ဒယ်ကိုသုံးပါလျှင်ပုံရိပ်, မယုံနိုင်လောက်အောင်ဣတ္နိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အမြင်အာရုံအသံအတိုးအကျယ်ထပ်ပြောသည်ကြောင့်စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့တင်ပါး၏ပိုင်ရှင်များအတွက်သင့်လျော်သောမကျမည်အကြောင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်,
အနီးကပ်သငျ့အင်္ကျီကိုအဓိကအားကြော့လေးကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်, ဒါပေမယ့်အဘို့အသွားနိုင်ပါတယ် နေ့စဉ်သွားလာ ။ အလွယ်တကူအဝတ်အစားများစွာသောဆောင်းပါးနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်သောဤစွယ်စုံ outerwear;
ကြီးမားသောခလုတ်တွေနဲ့အလှဆင်အကူအညီနဲ့တိကျတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေဥပမာ, ပတ်လည်ကော်လာ, သားမွေးတိပါးပျဉ်းမူရင်းပုံစံ, ကျယ်ပြန့်အင်္ကျီလက်၏ထိပ်ပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်ရန်,
များစွာသောထုတ်ကုန်အတွက်ပါးပျဉ်းအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရသောသားမွေးအလှဆင်သည်, ကော်လာ, အ cuffs, ပနျးပှားကိုမြှ, အိတ်ကပ်ကိုသုံး;
လျှပ်ကာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရွေးချယ်စရာအလွန်ပူနွေးပြီးလွယ်ကူတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်သည့်အထူးသဖြင့်လူကြိုက်များပုံစံ-သငျ့အင်္ကျီ padding ကို polyester ရှိပါတယ်;
တင်ပါးကိုဖုံးလွှမ်းတဲ့အရှည် MIDI သို့မဟုတ် Maxi ရှိခြင်းဆောင်းပါးတွေကလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်အအေးဆန့်ကျင်နောက်ထပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးသညျ။
ဆောင်းဦးရာသီ-နွေဦးရာသီအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော Demi-ရာသီပုံစံ-သငျ့အင်္ကျီဖြစ်ပါတယ်။ ဆောငျးရာသီဂျနဲ့နှိုင်းယှဉ်မရှိ insulator တွင်လည်းရှိနေပါသည်ကြောင့်ပိုပြီးပေါ့ပါးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုထိုကဲ့သို့သောပိုင်ထိုက်သောစရိုက်များများအတွက်:
တစ်ဦးချင်းစီအရသာပေါ် မူတည်. တစ်ဦးနွေဦးစိတ်ဓါတ်များပေးခြင်း, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းသို့မဟုတ်တောက်ပပြည့်အရောင်များကိုရွေးချယ်တော်မူနိုင်ပါသည်;
ဖြတ်ရင်ခုန်စရာပုံရိပ်အောင်ရင်ဘတ် shuttlecocks အတွက်, ဥပမာ, တစ်ရိုးရှင်းပြီးလိုရင်းတိုဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောပြီးပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်မည်အကြောင်း,
: ထိုသို့သောအနီးကပ်သငျ့ outerwear ဖက်ရှင်အင်္ကျီကိုအောက်ပါအသေးစိတျအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပုံစံများမူကွဲအမျိုးမျိုးအတွက်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်
ရှိစေခြင်းငှါ အင်္ဂလိပ်ကော်လာ တစ်ဦး shawl ကော်လာ၏ပုံစံကိုဖန်ဆင်း "သိုလှောင်ဆင်" ဗားရှင်းပိတ်နိုင်ပါသည်, vorotnichok-;
ဖြတ်ခြင်း, ပုံပေါ်တွင်ကပ်လျက်ပြားဖြစ်, သို့မဟုတ်တစ်အိုးပေါကျကှဲအောက်ဆုံးရှိနိုင်ပါသည်;
အရောင်အဘို့အကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအနက်ရောင်, နက်ပြာရောင်အရောင်, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအလငျးဖွစျ, က, အဖြူအဝါနုရောင်ရှိသောအလင်းပန်းရောင်, အပြာပုံစံ-သငျ့ကုတ်အင်္ကျီ, ဒါမှမဟုတ်တောက်ပနှင့်တက်ကြွဖြစ်ပါတယ်, ဒီအနီ, aquamarine, ကတ္တီပါနီအဖြစ်မှောင်မိုက်အရောင်များကိုစဲစေနိုင်သည် အရိပ်။
အရောင်များစဲ, သူတို့ကမှောင်မိုက်နှင့်အလင်းနှစ်ဦးစလုံး pastel နိုင်ပါတယ်နိုင်တတ်၏။
မူရင်းအမှတ်ရစရာကြက်သွန်နီအမျိုးသမီးပုံစံ-သငျ့ကို double-ရင်သားကင်ဆာကုတ်အင်္ကျီကိုကူညီဖန်တီးပါ။ ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများအနက်အောက်ပါနေသောခေါင်းစဉ်:
preference ကို, အထည်ကနေအရောင်ကွဲပြားခြားနားသောခလုတ်မှပေးထားသော၎င်း၏နောက်ခံဆန့်ကျင်ထွက်မတ်တပ်ရပ်ခြင်းနှင့်ဆနျ့ကငျြဘကထိရောက်သောလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးထုပ်မပါဘဲလုပ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့အဘယ်သူသည်အဆင်းလှသောလိင်, အမြိုးသမီးမြားဟာပါးပျဉ်းနှင့်အတူပုံစံ-သငျ့အင်ျကြီကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေးရာသီ, ကိန်းဂဏန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းအရသာ၏အင်္ဂါရပ်များအပေါ် မူတည်. ဖျော်ဖြေနေသည်။ အဆိုပါပါးပျဉ်းအင်္ဂါရပ်ရှိစေခြင်းငှါ:
ပခုံးပေါ်ဆင်း, shawls ၏ပုံစံကိုဖန်ဆင်းပုံမှန်သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်ဖြတ်ဖြစ်;
သားမွေးကိုချုံ့, သို့မဟုတ်ပါကမပါဘဲလုပျရှိသည်။ အဆိုပါသားမွေးသည့်သဘာဝနှင့်အတုနှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုသည်။ အလားတူအလှဆင်ထုတ်ကုန်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်: အ cuffs, အိတ်ကပ်နှင့်အနားပေါ်မှာ။
zastezhku- "လျှပ်စီး" ရှိခြင်းဒူးအလွန်စတိုင်ရူပနှင့်ထူးခြားသောအနီးကပ်သငျ့ကုတ်အင်္ကျီ, ဤအကြောင်းအရာသည် functional ဖြစ်စေ, ဒါပေမယ့်လည်းအလှဆင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာလုပ်ဆောင်တယ်။ ဒီဇိုင်းအတွက်ထိုကဲ့သို့သောမူကွဲရှိပါတယ်:
ဆောင်းတွင်း-နွေဦးသို့မဟုတ်ဆောင်းဦးရာသီများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုအမျိုးသမီးပုံစံ-သငျ့အနက်ရောင်ကုတ်အင်္ကျီတစ်ရှိခြင်းလိမ့်မယ် စောင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ ။ ဒါဟာ firmware ကိုအောက်ပါမူကွဲများတွင်ဖျော်ဖြေနိုင်ပြီးတစ်အပူပေးစက်ပါဝင်, ဒါမှမဟုတ်မပါဘဲဖြစ်နိုင်သည်:
ကျဉ်းမြောင်းသောသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်စေခြင်းငှါအရာအလျားလိုက် strips တွေ၏ပုံစံ;
ကြီးမားသောသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ရင်ပြင်သို့မဟုတ် lozenges ပြခြင်း,
ဂွမ်းစောင်များကိုသဘောင်္ပစ္စည်းများထိုးပြီးအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူ, ဥပမာ, အခြားဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံစံ-သငျ့အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
ပုံစံ-သငျ့အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်ဖို့ဘယ်လို: တစ်စတိုင်ဝယ်ယူအံ့သြစရာပါစေရန်ဆုံးဖြတ်ကြသူမိန်းကလေးများ, အဲဒါကိုဗီရိုပစ္စည်းများကို၏ရွေးချယ်ရေးအတွက်အကောင့်သို့ထိုသို့သောအမှုကိုအယူရန်အကြံပြုသည်:
အနိမ့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသော bootleg ရှိခြင်းတစ်ဦးကိုရွေးချယ်ဖိနပ်ပေါ် မူတည်. ဆောင်းပါး၏အရှည်။
ထိပ် Making သင်သည်ထိုသူတို့မပါဘဲလုပ်ဖို့အချို့ဆက်စပ်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပိုကောင်းကောက်လို့ရပါတယ်ရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ရင်ဘတ်ဧရိယာထဲမှာအခွားကော်လာနှင့် flounces လည်းမရှိဆိုပါကဘောင်းဘီရှည်ကိုဝတ်ဆင်အခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ scarves မှရှောင်ကြဉ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Vorotnik- "ထိန်သိမ်း" သို့မဟုတ်ယင်း၏မရှိခြင်းအပြည့်အဝကသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုဖော်ပြပြီးတောက်ပစတိုင် scarves နုန်း scarves ရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။
ရွေးချယ်ထားသောစတိုင်အောက်ခြေအပေါ် မူတည်. ကသူတို့အကြံပြုအရှည်အထက်အဝတ်အစားရဲ့အရှည်ထက်မပိုသင့်တယ်ဆင်မြန်းသို့မဟုတ်အဝတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်ဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီလျှင်, သင်အကောင့်ထဲသို့ထိပ်၏ဖြတ်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီဟာတိုက်ရိုက်ပုံစံ-သငျ့အင်္ကျီဖြစ်ပါတယ်လျှင်, သငျသညျကျဉ်းအဖြစ်နေဖို့တိုက်ရိုက်နှင့်မှနိုင်ပါတယ် ခေါင်းလောင်း-အောက်ခြေဘောင်းဘီ ။ တစ်ခုတိုးချဲ့အနားရှိပါကဂျင်းဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဘောင်းဘီတစ်ဦးကျဉ်းမြောင်းတဲ့မော်ဒယ်ရွေးချယ် သာ. ကောင်း၏။
ကျဉ်း wear ပုံစံဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီပိုကောင်း;
အမျိုးမျိုးသောမော်ဒယ်များ၏ဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အတူကဒူးသို့မဟုတ်ပေါင်မှအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟုအရေခွံ, ဂန္ဖြောင့်ဘောင်းဘီ, ကျဉ်းစေနိုင်သည်;
ဖြောင့်သို့မဟုတ်အဝတ်အလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့သည်ဟု, ရာ၏အရှည် Maxi မှသေးငယ်တဲ့အနေဖြင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်;
အရာအရောင်အစီအစဉ်အဝတ်အစားများ၏အရောင်များပေါ် မူတည်. ရွေးချယ်ထားပါသည်။ အနီရောင်တောက်တောက်ပုံစံ-သငျ့အင်္ကျီကဲ့သို့သောအနက်ရောင်သို့မဟုတ်နက်ပြာရောင်အဖြစ်အရာနှင့်ပေါင်းစပ်ရန် သာ. ကောင်း၏။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအရောင်ကိုဖန်ဆင်း Outerwear, အဝတ်အစားအရောင်နီးပါးမည်သည့်ဆောင်းပါးနှင့်အတူပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးအနီးကပ်သငျ့ကုတ်အင်္ကျီနဲ့သဟဇာတလေးဖန်တီးဖို့, ကမှန်ကန်စွာသူ့ကိုဖို့ဖိနပ်ရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ရွေးချယ်မှုများ၏ထိုကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်ခွင့်ပြုခဲ့:
တိုတောင်းဘို့ outerwear မဆိုဖိနပ် fit: အနိမ့်အပြောင်းအရွေ့, ပလက်ဖောင်းပြင်ဆင်ပြီးသုံး, ကျယ်ပြန့်သို့မဟုတ်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ဒေါက်ဖိနပ်။ ယင်းဝင်ရိုး၏အမြင့်ဖိနပ်ပုံနဲ့ဆင်တူတယ်, အနိမ့်အလတ်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်။
တိုးချဲ့မော်ဒယ်တစ်ဦးအပေါ် shafted အနိမ့်ဖနောင့်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောပြင်ဆင်ပြီးသုံးနှင့်အတူဖိနပ်သို့မဟုတ်ဘွတ်ဖိနပ်ရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။
ကုတ်အင်္ကျီ prima လာကြ
Ugg ဘွတ်ဖိနပ် Bearpaw
အိပ်ခန်းအဘို့အ Freestanding ပရိဘောဂ
အဖြူရောင်ကုတ်အင်္ကျီ - အဆင်းလှသောနှင့်အဆင်ပြေအိမ်မှာမော်ဒယ်များ
Sylvester Stallone ရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော "အော်စကာ" မရခဲ့ဘူး
မာတင် Freeman ကလျှို့ဝှက်စွာမန်ဒါ Abbington လက်ထပ်
ကုတ်အင်္ကျီအပြာဝတ်ကိုအဘယ်သို့ မှစ. ?
အဆိုပါယုန်အစာကျွေးဖို့ကိုဘယ်လို - အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောမြိုးဆကျအတှကျရိုးရှင်းသောအကြံပေးချက်များ